gydl: Muuqaal garaaf ah oo loogu talagalay youtube-dl | Laga soo bilaabo Linux
In badan oo naga mid ah ayaa maalin kasta adeegsada aaladda terminal ee awoodda badan youtube-dl, taas oo noo ogolaaneysa inaan si deg deg ah oo fudud u soo dejino fiidiyowyada YouTube-ka. Hagaag, dhowr bilood kahor interface interface garaaf ah oo aad uwanaagsan oo la yiraahdo gydl taas ayaa si fudud noo ogolaaneysa u isticmaal teknoolojiyadda youtube-dl GUI.
1 Waa maxay gydl?
2 Sidee loo rakibaa gydl?
Waa maxay gydl?
Gydl (kaas oo loo soo gaabiyo Graphical Youtube-dl), waa muuqaal garaafid ah oo u shaqeynaya sidii duub loogu talagalay aaladda Youtube-dl ee horay loo aqoonsan yahay, taas oo kuu oggolaaneysa inaad kala soo degto fiidiyowyada iyo maqalka qaab ka fudud, iyo sidoo kale inaad leedahay inta badan farsamooyinka aasaasiga ah ee farsamada.
Qalabkan waxaa soo saaray Jannik Hauptvogel isticmaalaya Python 3 iyo GTK + 3, hawlgalkeedu waa mid aad u fudud, waa inaan galno url fiidiyow YouTube ah ka dibna aan dooranno haddii aan dooneyno inaan soo dejino fiidiyowga ama codka, ka dibna waxaan dooran karnaa qaabka wax soo saarka iyo tayada isku mid ah, waayo Ugu dambeyntiina, waxaan doorannaa badhanka soo dejinta oo aan sugno aaladda si loo soo dejiyo fiidiyaha.
Marwalba isdhexgalka wuxuu socodsiiyaa tiknoolajiyada Youtube-dl, shaqadeeduna waa inay siiso fursad fudud oo saaxiibtinimo mid kasta oo ka mid ah waxqabadka Youtube-dl. Naqshadeedu waa mid fudud oo waxay u adeegsaneysaa khibrada ku saleysan wada hadalka, waxay u maareysaa fariimaha qaab ku haboon waana ku haboon tahay dhamaan kuwa doonaya inay ka fogaadaan xarunta laakiin raba inay soo dejiyaan fiidiyowyada YouTube-ka ee Linux.
Sidee loo rakibaa gydl?
Waqtigaan la joogo gydl wuxuu leeyahay xirmo rakibid ah oo loogu talagalay Arch Linux iyo noocyo kala duwan, waxay ku jiraan keydka AUR waxaana lagu rakibi karaa adoo fulinaya amarka soo socda:
Qalabku wuxuu helayaa dib-u-habeyn koodh iyo u guuritaan luqadda C sidaa darteed maalmaha soo socda waxay u badan tahay inuu heli doono cusbooneysiin dhammaystiran qaab-dhismeedkiisa iyo muuqaalkiisa garaafyada labadaba. Hadda, haddii xilligan la joogo aad isticmaasho Arch Linux ama noocyo kala duwan oo aad rabto inaad ku raaxaysato muuqaal garaaf ah oo loogu talagalay youtube-dl, waa wakhti fiican oo la sameeyo, maaddaama sida ku cad tijaabooyinkaygu qalabku uu ahaa mid aad u deggan, waxtar badan oo si fudud loo isticmaali karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » gydl: Muuqaal garaaf ah oo loogu talagalay youtube-dl
Aad baad u mahadsantahay, waxaan raadinayay wax sidaas oo kale ah manaan jeclayn plugins-ka kumbuyuutarrada ee sheeganaya inay sidaas yihiin.
Waxay ku habboon tahay kuwa aan isticmaalin terminaalka. Kiiskeyga, waxaan u adeegsadaa magacyo si loo fududeeyo doodaha youtube-dl. Waxay umuuqataa mid wax ku ool ah in la isticmaalo magacyada (ama shaqooyinka haddii ay isticmaalaan kalluunka Shell).
Telegram bot wuxuu ugu yeeray @YoutubeConvertBot kuwa badanna waxay sameeyaan tan iyo waxbadan maxaa yeelay waxay keydiyaan fiidiyowyada si aysan waligood u lumin 🙂
Ku jawaab janio carvajal
Waxaan ka isticmaalaa terminaalka, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan isticmaalo is-dhexgalka, fadlan ha fahmin sida loo soo ururiyo, waa la qaddarin doonaa sida loogu sameeyo debian iyo waxyaabaha la mid ah.
Aynu bilowno barnaamijka sanadka